एनआरएनए युकेका प्रमुख संरक्षक प्रा.डा.सुवेदी भन्छन् ‘युकेमा दुईटा एनआरएन छैन’ | We Nepali
२०७१ कार्तिक ३० गते १५:१६
लण्डन । एनआरएनए युके प्रमुख संरक्षक प्रा.डा. सूर्य सुवेदीले एनआरएनए आइसिसीले एनआरएनए युकेका बारेमा हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिले आफूलाई दुःखी बनाएको बताएका छन् ।
महेन्द्र कँडेल पक्षीय एनआरएनए युकेको आज लण्डनको उलवीचमा कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रा.डा.सुवेदीले विवादित विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्नु पूर्व आइसिसीले विधान नहेरेको गुनासो गरे । उनले भने-एनआरएन आइसिसीको हिजोको विज्ञप्तिले मलाई दुःख लागेको छ ।
गतवर्ष युकेमा दुई वटा एनआरएन गठन भएपछि प्रा.डा. सुवेदीको अथक प्रयासले एकता कायम भएको थियो । तत्कालीन आइसिसी अध्यक्ष जीवा लामिछाने र संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको सहमतिमा सुवेदीले गरेको एकताअनुसार पहिलो वर्ष योगेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा काम गर्ने र अर्को वर्ष महेन्द्र कँडेलले कार्यकारी अध्यक्ष चलाउन सहमति गरिएको थियो ।
तर एनआरएन आइसिसीले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा विवादको किनारा नलागेसम्म योगेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नै अध्यक्षको कार्य गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रा.डा. सुवेदीले महेन्द्र कँडेललाई संस्थाको भविष्य तथा नेपाल अनि नेपालीको हितका लागि काम गर्न सुझाव दिए । अहिले युकेमा दुई वटा एनआरएन रहेको भन्ने टिप्पणीलाई सीधै अस्वीकार गर्दै उनले भने – ‘दुई पक्षको कार्यसमिति भन्ने नै छैन । हस्ताक्षर गरेर सहमति गरी हिंडिसकेपछि एनआरएनए युके दुईटा भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।’
आफ्नो पहलमा गत साल गरिएको सहमतिलाई नमान्नेहरुलाई केही आलोचना गर्न चाहन्न भन्दै उनले एनआरएनको भविष्य, नेपाल र नेपालीको हितका लागि एकजुट गराउने प्रयासलाई कहिल्यै नरोक्ने दृढता व्यक्त गरे । आफू कुनै राजनीतिक दलको झण्डा नबोक्ने र विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्ति भएको दोहोर्याउंदै उनले विभाजित समाज देख्न नसकेर धेरै दुःखको साथ गत वर्ष सहमति गराएको उल्लेख गरे । सहमतिप्रति प्रश्न उठाउनेप्रति कडा शैलीमा उनले भने ‘कि अन्धो कि नाबालग कि अनपढ हुनुपर्यो नत्र दस्तखत गरिसकेपछि र एनआरएनको ग्लोबल कन्फ्रेन्सले पास गरेपछि यसको वैधता छैन भन्दा दुःख लाग्यो ।’
एनआरएन युकेमा कुनै विवाद नभएको बताउँदै उनले विषयलाई उछालिएको आरोप लगाए । ‘म मञ्जुर गर्छु भनिसकेपछि बोल्नुको पनि शिष्टता र सीमा हुन्छ । सबैले सहमति गरिसकेपछि अब फेरि केको विवाद ?’ सुवेदीको प्रश्न थियो ।
कुनै पनि संस्थाभित्र मतमतान्तर हुनु नयाँ कुरा नभएको बरु त्यसो गर्दा समाजको शिष्टता र मर्यादा भुल्न नहुने उनले स्मरण गराए । दश वर्षदेखि एनआरएन आइसिसीमा रहेको आफूलाई नै अहिले आलोचना गरिँदा दुःख लागेको उनले बताए ।
उनले एनआरएन युकेलाई नेपाल र बेलायतमा बसिरहेका नेपाली र ब्रिटिश कम्युनिटीलाई सहयोग र हित हुने काम गर्न सल्लाह दिए । एनआरएन भवन र नेपाल हाउस बनाउन पनि उनले अपील गरे ।
स्थानीय एल्थाम क्षेत्रका सांसद क्लाइभ इफोर्डले युकेको विविधतायुक्त समाजमा नेपाली पनि एक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालीहरुसित सहकार्य गर्न लालयित भएको बताए ।
प्रवासी नेपाली मञ्चका अध्यक्ष रामशरण सिंखडाले एनआरएन केन्द्रको पत्रका कारण विचलित हुन आवश्यक नरहेको बताए । सो पत्र केन्द्रको नभई कसैको लहडवाजीको उपज भएको आरोप सिंखडाले लगाए ।
लेबोरका ग्रीनवीच क्षेत्रबाट आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार रहेका म्याथ्यु पेनिकुले नेपाली समुदायको कदर गर्दै एनआरएनएलाई आफूहरुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
महेन्द्र कँडेल अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सूर्य नेम्बाङले स्वागत मन्तब्य दिएका थिए । कार्यक्रममा हृवोन्सोका उपमेयर विष्णु गुरुङ, डा. पुरुषोत्तम पौडेल, आङकल्जङ लामा, यति एसोसिएसनका अध्यक्ष उमेश मोक्तान, एनआरएनए आइसिसी मेम्बर विजन भट्ट, सुरेशजंग शाहले मन्तब्य दिएका थिए ।
कार्यक्रममा विश्वका सबैभन्दा होचा चन्द्रबहादुर डाँगी विशेष आकर्षण रहेका थिए ।
कार्यक्रममा शङकर दाहाल, रेशम शेरचन, ज्ञान शेरचन, राजेन्द्र भट्ट, वाचस्पति रेग्मी र नवीन पोखरेललाई प्रमुख अतिथि सुवेदीले खादा लगाइ सम्मान गरेका थिए ।